War ay baahisay Warfaafinta Qaranka oo ay dadku aad u dhaliileen oo markii dambe la saaray (Waa maxay?) | Hadalsame Media
Home Wararka War ay baahisay Warfaafinta Qaranka oo ay dadku aad u dhaliileen oo...
War ay baahisay Warfaafinta Qaranka oo ay dadku aad u dhaliileen oo markii dambe la saaray (Waa maxay?)
(Hadalsame) 30 Sebt 2021 – Waxaa soconaya doorashooyinka Baarlamanka DF Somalia oo lagu bilaabay Aqalka Sare oo ay haatan dhamaanayso midda Somaliland, balse kuma bilaaban kumana socdaan si xor iyo xalaal ah.
Waxaa doorashooyinkan lagu bilaabay qaab gef ku ah xuquuqda madaniga ah ee muwaadinka sida in dadka qaar looba diidey inay tartamaan, nin tooxsi kaddib markii dad gaar ah loo sallaxay kuraasida qaar, laaluush kaddib markii lacago lagu qanciyey dad tartamayey iyo tan ugu daran oo ah lacag bixin iyo kalsooni darro is wata iyadoo qofka lagu waajibinayo inuu yiraahdo waa ”tanaasuley.”
Midda ugu darani waa in hab-dhaqankan silloon ay si siman u wada xayaysiiyaan uguna qanacsan yihiin rag iskugu jira mucaarad iyo muxaafid ay ku jiraan qaar gacanta midig u ah Madaxtooyadii dhamayd ee ilaalin lahayd Dastuurka dalka.
”Hebel imisa Xildhibaan ayuu soo saartay?!” – Waa su’aal caadi ka ah masraxyada ololaha siyaasadda waqtigan, taasoo gef ku ah Xildhibaanka oo sida magaciisa ka muuqata ah qof la doonayo inuu yeeshi dux iyo imaan howsha muhimka ah ee loo diray darteed.
Yeelkeede, midda taa lafteeda kasii foolxumi waa in hay’aadkii warbaahineed ee sheeganayey magaca qaranku ay waxaa daabacaan kuna qancaan, iyagoo tuuraya waajibkii saarnaa maadaama ay yihiin kuwo ku shaqeeya hantida dadwaynaha, waloow inta taa fahamsaniba ay yar tahay oo ay isu haystaan inay dowladdu leedahay.
Waxaa webka Wakaaladda Wararka SONNA lagu qoray sidatan: ”Muxuu yahay Kursiga kaliya ee lasii ogyahay Senitor kusoo bixi doona ka hor wakhtigii Codaynta Doorashada kuraasta Aqalka Sare ee Goboladda Waqooyi (#Somaliland) oo maanta lagu soo gabagabayn doono.”
Yeelkeede, dadwaynihii ayaa si wayn uga fal-celiyey aadna u dhaliilay, deetana waxaa la bedeley qoraalkii webka waloow ay muuqato inay illaaween in warkan Twitter-kana laga saaro.
Dhaqamadan ayaa ceel dheer ku ridaya hufnaanta nidaamka Somalia oo halkii laga sugayey in la cillad saaro sanadihii ugu dambeeyey kasii daraya, marka meelo badan la eego.
Previous articleDHEGEYSO: Jahawareer ka taagan inay shaqo tegi karaan dumarka UURKA leh xitaa marka ay is TALLAALAAN
Next articleMa kula tahay inay Somalia joogi karaan madax sare oo JAWAASIIS ah?! (Akhri sheekadan)